सफल हुन मंगलबारका दिन यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस्
आज मंगलबारको दिन । मान्यताका अनुसार मंगलबारको सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग हुन्छ । यस दिनलाई हनुमान जीको दिन पनि भनिन्छ । यस दिनलाई मंगलको उर्जा पनि मानिन्नछ ।
श्रीमतीहरुलाई जहिल्यै यस्ता परिबन्धनले अल्झाउने गर्छ
विवाह एउटा यस्तो सम्बन्ध हो जसले श्रीमान र श्रीमतीलाई एकअर्कोसँग पुर्ण जिम्मेदारीका साथ जीवन बिताउन प्रेरित गर्छ । यदी यो सम्बन्धमा कुनै खाले तिक्तता आउँछ भने जीवनभर दरारमात्र पैदा हुन्छ । कतिपटक घरमा सुन्दर श्रीमती हुदाँहुँदै पनि श्रीमानले बाहिर अफयेर चलाउने गर्छन् । आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिने काम गर्छन् ।
कुन–कुन राशिकाबीच विवाह गर्नु हुदैन ?
पैसाको कमी हुन नदिन प्रत्येक बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस्
मध्यराति निन्द्रा खुल्छ ? कतै यी कारणहरु त होइनन्
के तपाईको हत्केलामा पनि छ ‘V’ चिन्ह ?
दृढ विश्वासका धनी अनन्त अम्बानी !
एजेन्सी । १०८ किलो शरिरको वजन घटाउन सम्भब होला त ? सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्ला । यदि मानिसमा दृढ इच्छाशक्ति भएमा सकिन्छ भनेर नै प्रमाणित गरिदिए अन्तत अम्बानीले । डेढ वर्षभित्र १०८ किलो शरिरको तौल घटाएरे चौतर्फी चर्चाको पात्र बने अनन्त अम्बानी ।
आठ वटा खुट्टा भएको बाख्रा हेर्नुहाेस्
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ तालपोखरा बस्ने कृषक गोविन्दबहादुर घर्ती र हरिमाया घर्तीको घरमा पालिएको बाख्राबाट जन्मिएको आठ वटा खुट्टा भएको, एक वटा टाउको, छातीबाट तल दुई भाग फाँटेर छुट्टिएको, चार वटा कान भएको, पाठापाठी नचिनिने खालको अनौठो बाख्रा जन्मिएको छ ।